Political Page ပုလဲသွယ်: ၂၅-၁၁-၂ဝ၁၂ အိန္ဒိယ-မြန်မာ စစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမည်
၂၅-၁၁-၂ဝ၁၂ အိန္ဒိယ-မြန်မာ စစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမည်
25-11-2012 India aims to ramp up military ties with Myanmar
By Rajat Pandit, TNN | Nov 25, 2012, 02.58 AM IST
NEW DELHI: India is aiming to ramp up its military ties with Myanmar, after PM Manmohan Singh set the stage for greater bilateral economic cooperation during his visit to Naypyitaw last May, as part of the overall policy to stem Chinese strategic inroads into the energy-rich south-east Asian country.
Defence ministry sources said Air Chief Marshal N A K Browne, in his capacity as the country's senior-most military officer and chairman of the chiefs of staff committee, will be leadingafive-member delegation to Myanmar next week.
Defence minister A K Antony will be heading for Naypyitaw early next year to further firm up defence ties — ranging from training and intelligence coordination to "capacity building'' and supply of military equipment to Myanmar.
"The IAF chief-led delegation will be in Myanmar from November 26 to 29, but the dates for the ministerial visit are yet to be finalized,'' saidasource. ACM Browne will be calling on the top Myanmarese leadership, apart from holding talks with the military commander-in-chief General Min Aung Hlaing and visiting military establishments.
The top Indian defence visits to Myanmar come soon after Barack Obama earlier this month became the first US President to visit Myanmar, which is slowly undergoing some politico-democratic reforms after half-a-century of beingasecretive authoritarian state.
It also comes in the backdrop of Nobel Peace Prize winner Aung San Suu Kyi, released from house arrest by the military junta in 2010, recently expressing `sadness'' at the way the Indian establishment cosied up to the Myanmarese military government over the last decade instead of whole-heartedly supporting the pro-democracy movement in her country.
It was in the late-1990s that India undertookahard-nosed strategic U-turn in its policy towards Myanmar, after several years of supporting Suu Kyi's democratic movement, when it found China had assiduously forged deep links with Naypyitaw by filling in the vacuum.
Moreover, India also wanted the junta's cooperation in flushing out Indian insurgent groups operating from Myanmarese soil as well as to bolster its eastern region's connectivity to the outside world.
Since then, India has transferred military equipment like Islander maritime patrol aircraft as well as 105mm light artillery guns, naval gun-boats, mortars, grenade-launchers and rifles to Myanmar, the only ASEAN country with which it shares land and maritime borders.
During the PM's trip to Myanmar in May — the first such visit in 25 years — the two countries inkedadozen MoUs, from an air services agreement and border area development pact toajoint trade and investment forum and extension ofa$500-million line of credit to Naypyitaw.
As shown by the recent Obama visit to the country, western nations too have also come around to the Indian view of the need to engage with the Myanmarese military leadership in order to, among other things, push for democratic reforms.
အိန္ဒိယ လေတပ်ဦးစီးချုပ် မြန်မာပြည်သွား
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန | တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၃ နာရီ ၄၁ မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ လေတပ် ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး N.A. K. Browne ခေါင်းဆောင်သော ငါးဦးပါ အိန္ဒိယ တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် တနင်္လာနေ့တွင် ကာကွယ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ခရီးစဉ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည် ဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယ ကြည်း၊ ရေ၊ လေ အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများ ပါဝင်သည့် ဤ လေးရက်ကြာ ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြတ်ဟိန်းတို့နှင့် နှစ်နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးမြှင့်ရန်အတွက် တွေ့ဆုံမည် ဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယ သတင်းဌာနများတွင် ရေးသားထားကြသည်။
လက်ရှိ နှစ်နိုင်ငံ ပူးတွဲဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် ကျယ်ပြန့်သည့် စစ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၏ အစိတ်အပိုင်း တရပ်အဖြစ် အနာဂတ် အကျိုးတူကဏ္ဍများအတွက် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဟု သိရသည်။
အမျိုးသား ကာကွယ်ရေး ကောလိပ်၊ လေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းနှင့် ကလောမြို့ရှိ လေယာဉ် ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် တပ်ဆင်ရေးစက်ရုံသို့လည်း သွားရောက်လေ့လာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဤခရီးစဉ်အပြင် မေလ အတွင်းက ဝန်ကြီးချုပ် မန်မိုဟန်ဆင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခြင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် နိုဝင်ဘာလအတွင်းက အိန္ဒိယသို့ လာရောက်ခြင်းနှင့် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ရန်ရှိသော အိန္ဒိယ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး A.K. Antony ၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်တို့မှာ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်လာနေကြောင်း သက်သေပြလျက်ရှိနေသည်ဟု အိန္ဒိယသတင်းစာများက ရေးသားကြသည်။